कैलाशको कुटी: Threshold
लौ,कैलाश जि हाम्रो समाजमा अझ पनि ति सडेगलेका रुडिबादि सश्कारहरु एथावत नै छ।जुन श्रीमानको नाम मुखले भन्न् नहुनेअनि जेठाजु ससुराको अगाडि घुम्टोले टाउको छोप्नु पर्ने अनि हास्दा खेरी दात देखिएमा अलछिन हुने यि कस्तो र कस्ले चलाईल्याएको चलन होला?अनि कहिले सम्म एस्ता कुरितिहरुले जरा गाडिरहने होला हाम्रो समाजमा!
राम्रै छ होला जस्तो छ ।
यथार्थ लेखन । Threshold ले दर्शाउन खोजेको भाब पनी त्यस्तै लाग्यो -तपाईको लेखाई अनुसार ।
अर्को कुरा भनौहोला तपाइले पिक्चर सेलेक्ट गर्दा एक दम सही गर्नु भएको छ - तपाईको टासो को आशय सबै बताउन सक्छ , तपाइले जे बताउन खोज्नु भा'छ त्यो सबै ।
...मलाइ लाग्छ -तपाईको ब्लग मार्फत तपाइले वृतचित्र लाइ न्याय दीन सक्नु भा'छ ।
कती प्रस्ट सँग बिस्लेशण गर्नु भो कैलाश जि । मलाई त च् ल चित्र हे रे झै लाग्यो ।
धन्यवाद है ।
सबै साथीहरुलाई धन्यवाद है। यो फिल्म नरेहीकनै मेरो लेखाईकै आधारमा पनि मन पराइदिनुभो। दीपकजी यो फिल्म राम्रो छ। वास्तवमा मलाई चाहि मन परेको मध्येकै हो। त्यसैले हिजोसमेत गरेर ३ पल्ट हेरे-पहिलोपल्ट सानो तर फिडब्याक लेनदेन गर्ने जमातमा, दोस्रोपल्ट KIMFFको उद्‌घाटनमा र तेस्रोपल्ट टिकट काटेरै राष्ट्रिय सभागृहमा गएरै। जे होस् राम्रो छ। दोहोर्याएर हेर्दा त अरु अरु थप कुरा पनि दिमागमा आयो। खैर अब त्यो कुरा अहिलेलाई थाँती राख्छु
Sarairamro film rahechha.Kailas je malai pani herau herau lagyo.Tara ma aaj dhila pasechhu tapaiko komal kutima.Namaskar.
यो फिल्मले KIMFF मा तेस्रो पुरस्कार पाएको छ। त्यसवापत थ्रेसहोल्टको सम्पूर्ण टोलीलाई बधाई, कुटीको तर्फबाट।